‘नाम केवल तिम्रो’मा अनुप र रक्षाको रोमान्स — Sanchar Kendra
गायक प्रताप दासको स्वर रहेको गीत ‘नाम केबल तिम्रो’ सार्वजनिक भएको छ । सागर अधिकारी ‘शरद’को संगति रहेको गीतमा कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको शब्द रहेको छ ।
आफूले माया गरेकी मायाको तारिफ गरिएको गीतको भिडियो समेत बनेको छ । जसमा अनुप बोहरा र रक्षा न्यौपानेको अभिनय देख्न सकिन्छ । कृष्ण पौडेलको निर्देशन रहेको भिडियोमा सुजन श्रेष्ठको छायाँकन र युवराज खत्रीको सम्पादन छ ।
गिजिन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसहित ५९ विधामा विश्व रेकर्ड राखेका गीतकार डा. उपाध्यायका र मायाप्रेम, रोमान्स विछोड गीतहरू धेरैे बाहिर आएका छन् ।